Fokon' i Robena - Wikipedia
Fokon' i Robena
(tonga teto avy amin'ny Fokon'i Robena)
Ny fokon' i Robena dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely. Atao hoe Robenita izy ireo. Ny fokon' i Robena dia nanorim-ponenana tamin' ny ilan-tany andafy atsinanan' ny ony Jordana. Isan' ireo fokon' i Israely lazaina fa nanjavona ny fokon' i Robena tamin' ny naharavan' ny Fanjakan' i Israely avaratra tamin' ny taona 722 tal. J.K.
1 I Robena
2 Ny tanin'ny Robenita
3 Anisan'ireo fokon'i Israely nanjavona
I Robena na Reobena (hebreo: ראובן / Reʾuben na Reʾuven) dia zanak'i Jakoba voalohany tamin'i Lea araka ny tantara ao amin'ny Bokin'ny Genesisy. I Robena ilay niangavy ireo rahalahiny mba tsy hamono an'i Josefa. Na dia lahimatoa aza i Robena dia tsy izy no mpitarika ireo rahalahiny. Ny zanak'i Robena dia i Henoka, i Palo, i Hetsrona (na Hezrona) ary i Karmy.
Ny tanin'ny RobenitaModifier
Roa taona taorian'ny fivoahana avy any Ejipta dia nisy lehilahy 46 500 feno 20 taona no ho miakatra ny fokon'i Robena (1Mpanj. 19.16.). Ny fokon'i Robena dia naka ny tany Kanaana ka nanorim-ponenana tamin'ny ila-tany andafy atsinanan'ny ony Jordana. Tamin'ny fanapahan'i Saoly (na Saola) dia niady tamin'ny fokon'ny Agareana (na Agarita) ny fokon'i Robena ka naharesy azy sady nanitatra ny fari-taniny tamin'ny fakàny ny ilany atsinanan'i Galaada (na Gileada) (jereo: 1Tant. 5.10).
Anisan'ireo fokon'i Israely nanjavonaModifier
Isan'ireo fokon'i Israely lazaina fa nanjavona ny fokon'i Robena tamin'ny nandravana ny Fanjakan'i Israely (na Fanjakan'i Samaria na Fanjakana Avaratra) tamin'ny taona 722 tal. J.K. nefa voalaza fa ny apostoly Petera (na Piera) dia isan'ny fokon'i Robena 750 taona taty aoriana. Ny mpaminany Elisa sy ny mpaminany Joela (na Joely) dia isan'ny fokon'i Robena.
↑ 1,0 et 1,1 Ao amin'ny Bokin'ny Renitantely (toko faha-32) dia voalaza fa avy any Mehola ao amin'ny fokon'i Robena i Elisa mpianatr'i Elia. Nisy fahagagana lehibe niseho tao Israely tamin'ny andro nahaterahany: ilay ombilahy (sampy resahin'i Epifanio ao amin' Ilay Ombivavy Volamena) izay notompoiny tao Gilgala dia niondrika (nietry) ka heno hatrany Jerosalema ny feony. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza ny mpisorona fa misy mpaminany mahery teraka tamin'io andro io ao Israely izay hanapotika ny sary sy ny sampy rehetra. Maty tanatin'ny fahasambarana izy ka nalevina tao Samaria.
↑ Mety ho lovantsofina apokrifa izany: ny mpanoratra kristiana dia mety te hampifandray ny apostoly voalohany amin'ny zanaka lahin'i Jakoba voalohany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fokon%27_i_Robena&oldid=1037390"
Dernière modification le 5 Septambra 2021, à 14:42
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 14:42 ity pejy ity.